आमिरपछि नाङिगदैछन शाहरुख पनि ? – Namaste Filmy
आमिरपछि नाङिगदैछन शाहरुख पनि ?
बलिउडमा एक समय थियो जुनबेला हिरोइनहरु नाङिगएर हट सीनहरु दिने गर्दथे । त्यसबेला हिरोइनको उत्तेजक अंग प्रदर्शनले फिल्म हिट हुन्थे । हिरो हरु भने भिलेनको धुलाई गरेर प्रशंसा कमाउथे । आफ्नो एक्सन देखाएरै हिरो हिट हुन्थे ।
तर अब समय फेरिएको छ । अहिलेको फिल्ममा हिरोइन हैन हिरो नाङिगएका फिल्म हिट हुन थालेका छन । हिरोइनहरु साधारण र इमान्दारीता प्रदर्शन गर्न थालेका छन । पछिल्लो समयको ब्लकबस्ट फिल्म पिके यसको उदाहरण हो । फिल्ममा आमिर खानको नग्नताले राम्रै चर्चा पायो । यहि नग्नताकै कारण फिल्म हेर्न दर्शक बढेको धेरैले अनुमान लगाए ।
त्यसैले होल अब बादशाह शाहरुख खानले पनि नाङिगने इच्छा देखाए । उनले एक अन्तरबार्ताका क्रममा भने मैले २०१४ मा आफ्नो एब्स देखाँए अब २०१५ मा कपडा उतार्छु । पछि उनले यो कुरा मात्र जोक्स भएको बताए पनि उनका फ्यानहरुले भने यो भनाईमा यथार्थमा हेर्न चाहेको बुझिन्छ ।
शाहरुखले आफ्नो अपकमिङ फिलम रइसको नाम बारम्बार लिइरहेका थिए । तसर्थ यसै फिल्ममा कतै शाहरुखको न्युड सीन त छैन सबैले अनुमान गरेका छन ।
डान्स चितवन डान्सको फाइनल चरण सम्पन्न । ग्रान्ड फाइनल माघ २६ मा (फोटो फिचर )
माघ २३ मा 'इस्केप' । नयाँ ट्रेलर रिलिज । भिडियो ।